Rongedza ISDone.dll error, Unarc.dll yakadzoka mhosho yekombiji yenzira Windows 10 - WebSetNet
The isDone.dll error shoko rinowanikwa pane dzimwe nguva Windows 10 yakabatana nekusakwana kusungirwa kwePc games kana mafaira ekukura kukuru. Sezvatinoziva, mitambo ine maikirwo akanaka uye kutamba nokukurumidza inowanzobatsira uye inodya nzvimbo yakawanda yekuchengetedza. Sezvo zvakadaro, inofanirwa kuomeswa isati yanyorera kuPC yako uye yobva isunungurwa kuenda kune dhirairi risati rasvika. Kana kukanganisa chero kupi zvako kunoitika muPC yako RAM munguva iyi kana Hard Disk isina mhemberero yakakwana yekuita, iyo PC yako inogona kutora ISDone.dll kukanganisa nemashoko anotevera,
Pane kukanganisa kwakaitika apo unpacking, Unarc.dll yakadzokorora kodhi yekodhi -1, ERROR: data ye archive yakaodzwa (decompression inokundikana).
Nhamba yekanganiso inogona kusiyanisa, asi chete bhatani yaunogona kuona ndeye - OK.
Iyo ISDone.dll yakawanikwa inokonzerwa nekuda kwekukanganisa Unarc.dll faira iri kugara muSty32 faira pane zvigadzirwa zve 32-bit uye SysWOW64 folda pane 64-bit systems. Saka, kana iwe ukaona mhosho iyi, ikozvino zvinoreva kuti kombiyuta yako yakange isingakwanisi kuverenga mafaira ekuchengetedza archive.
Chii chinonzi Unarc.dll file
Unarc.dll inesimba yekubatanidza raibhurari ye Windows. Zvimwe zvinoshandiswa kana mitambo inoda kuti iyi faira ishande nemazvo. Nekudaro, kana ikashaikwa kana, kukanganisa kunoitika kana iwe ukatanga mutambo kana chishandiso, unogona kuwana akasiyana marudzi ekukanganisa.
ISDone.dll error paunenge uchitamba mitambo paPC
1] Gadzirisai Mutambo
isDone.dll dzimwe nguva dzimwe nguva inowanikawo nokuda kwekuiswa kwechikumbiro chisingazivikanwi kana kana sarudzo yave isina nguva kana yakaora.
Kana mutambo wakadzingwa wakanganisa kana kuputsika ipapo mhosho inogona kugadziriswa kuburikidza nekudzorera zvakare mutambo. Saka, shandisai ikozvino yakagadziridzwa itsva itsva yemutambo uye chengetedza kana dambudziko rakagadziriswa.
2] Dzokorora faira .dll uchishandisa regsvr32 chida
Chokutanga chawanikwa ikozvino Unarc.dll file pakombiyuta yako uye uitumidze zvakare ku - Unarc-bak.dll.
Iye zvino tora kopi yakanaka yeUnarc.dll kubva kune imwe kombiyuta uye uichengetedze kwenguva duku kuDesktop.
Iye zvino fambisa iyi faira itsva dll ku:
System32 faira pane 32-bit operating systems
SysWOW64 faira pane 64-bit systems.
Iye zvino unoda nyora rejeri DLL file, Vhura hodhi yeWashShell yakakwirira uye ita murairo unotevera:
regsvr32% systemroot% System32unarc.dll
Kana iyo ikaiswa muSysWOW64, ipapo mutemo waizova:
regsvr32% systemroot% SysWOW64unarc.dll
Kana wapedza, uchaona mharidzo inoratidza kuti .dll file yakanyoreswa.
3] Troubleshoot mu clean boot state
Kuita Bhuku Rakachena hurumende inobatsira pakuratidza kana mamwe mapato evanhu vatatu kana kuti kutanga zvinhu ari kukonzera kukakavadzana.
Saka, vhura PC yako mu Clean Boot State uye edza kushandisa manyore. Kuti uite zvakachena-boot troubleshooting, unofanira kutora zviito zvakawanda, uye wozotangazve kombiyuta mushure mekuita chimwe chinhu. Iwe unogona kuvhara manyorero chimwe chinhu chimwe nechimwe kuti uedze uye uone kuti chii chinokonzera dambudziko. Kana uchinge wakaziva mutadzi, unogona kufunga kubvisa kana kudzivisa.
4] Kuvandudza Dhigiriji Dhidhiyo
Iwe unogonawo tsvaga madhairiro emifananidzo yako via Devices Manager uye ona kana izvozvo zvichibatsira.
Tariro chimwe chinhu apa chakakubatsira.
Kushaikwa kweVCOMP140.DLL kukanganisa mukati Windows 10 [CHINANGWA CHEMA]
Yakanakisisa mitambo yeMitambo yePC yekutengera: Mitambo inonakidza yekuwedzera kune yako yekuunganidza
Pamusoro Xbox One mitambo 2020: Best Xbox One S uye X mitambo yega yega gamer inofanira kunge iri
Mitambo yakanakisisa yeMac 2017